छातीमा गोलि थाप्न तयार छौ तर काठमाडौंबासीलाई मेलम्चीको खानेपानि दिदैनौ, हेलम्बुबासीको यस्तो चे तावनी (भिडियो) | भिडियो
June 24, 2021 NepstokLeaveaComment on छातीमा गोलि थाप्न तयार छौ तर काठमाडौंबासीलाई मेलम्चीको खानेपानि दिदैनौ, हेलम्बुबासीको यस्तो चे तावनी (भिडियो)
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई हामी सबै परिवारले नै भोट दिएको हो । तर उहाँ वाढी पीडित वस्तीमा आउनुभयो तर हेलम्बुमा आउनु भएन । अप्ठेरो परेको बेलामा हामीलाई हेर्न पनि आउनु भएन निकै दुख लाग्यो । हामीलाई अप्ठेरो पर्दा सरकारले पनि हेरेको छैन । यति धेरै क्षती भएको छ हेलिकप्टर आउँछ केही पोका चाउचाउ खसालेर जान्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले अब कुन नेतालाई भोट किन दिने ?
अब काठमाडौबासीले मेलम्चीको पानी खाउँला भनेर नसोचे पनि हुन्छ । मेलम्चीमा आएको बाढीका कारण आफ्नो सर्वश्व गुमाएका स्थानियको यो आक्रोश हो । अहिले हामीले चेतावनी दिएका छौं यस्तै वेवास्ता भयो भने हामी निर्णयनै गर्न बाध्य हुनेछौं । आफ्नो पुर्खा देखि दुख गरेर जम्मा गरेको सबै सम्पत्ती सकिदा पनि सरकारले वास्ता नगरेका कारण उनीहरु आक्रोशित भएका छन् ।
अब पनि बाटोको राम्रो ब्यवस्था नभए, हामीलाई सुरक्षित राख्ने तर्फ ध्यान नदिए मेलम्चीको पानी काठमाडौ जाने अवस्था रहन्न । हामी अवरोध गर्छौ । राहत र सहयोगका लागि भनेर काठमाडौवाट कोही आउँछन् तर मेलम्ची बजार डुलेर फर्कन्छन् । हेलम्बु सम्म कोही पुग्न सक्दैनन् ।
हेलम्बुमा राहत नपुगेको खबरपछि केहीले हेलिकप्टरमार्फत सहयोग पुर्‍याउन थालिएको भएपनि त्यो ब्यवस्थित हुन सकेको छैन । राहत ल्याउनेहरुले मनपरी गर्न थालेको स्थानीयको आरोप छ। नेकपा एमाले सिन्धुपाल्चोकका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका हस्त पण्डितले आइतवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा हेलिकप्टरमा आएको राहतमाथि प्रश्नसमेत गरेका छन्।
हाम्रो पीडा हाम्रो ठाउँमा छ तर यो नाटक किन ? सहयोग गर्न आको कि बाढी पर्यटन हेर्न आको ? १० थान पी फोम, १९ बाकस चाउचाउ, २ पकेट पियुस, ३ पकेट जीवनजल र ३ पकेट मास्कको पैसा कति र हेलिकप्टर भाडा कति ? उनले प्रश्न गरेका छन्।
बिहेमा गएका श्रीमान फर्केर घरमा आउदा कोठामा श्रीमतीसंग अर्कै परपुरूष देखेपछि ……
बिजय शाहीले काठमाडौँमा घर पाएपछि पुण्य गौतम ३ छक्क, बिजयलाइ दिए कडा जबाफ (भिडियो सहित)
April 29, 2021 April 29, 2021 Nepstok
ऋषि पत्नि एलिजा जिममा मस्त (भिडियो सहित)